Potassium chloride (potassium chloride): ngwa oru ugbo - Fatịlaịza - 2019
Maka usoro mmepe nke osisi ọ bụla, atọ nri dị mkpa: nitrogen, phosphorus na potassium. Nitrogen na-enye aka n'uto ha na ịmị mkpụrụ, site na-eme ka mmepe ahụ dịkwuo elu, potassium na-enyekwa aka ubi a kụrụ iji merie nchekasị n'ụdị ọnọdụ ọjọọ, iji nagide ọrịa, iji weta mkpụrụ osisi dị elu na ogologo oge. Fatịlaịza potassium gụnyere potassium sulfate, ash, potassium nnu na potassium chloride. Na nke ikpeazụ na a ga-atụle n'isiokwu a.
Ihe ịrịba ama nke erughị oke na pasent potassium na osisi
Nji potassium chloride na ugbo
Potassium chloride ngwa ngwa fatịlaịza
Nkọwa na physico-chemical àgwà nke potassium chloride
Igwe chloride potassium dị n'ụdị kristal na-acha ọcha na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha uhie uhie na-enweghị isi na nnu nnu.
Dị ka ihe na-emepụta ọgwụ na-emepụta kemikal nwere usoro KCl (potassium nnu nke hydrochloric acid). Molar mass - 74.55 g / mol, njupụta - 1988 g / cu. lee
Obere soluble na mmiri: na 100 ml na efu okpomọkụ - 28.1 g; na +20 ° C - 34 g; na + 100 Celsius C - 56.7 g. Ihe ngwọta mmiri mmiri na-agba na okpomọkụ nke 108.56 Celsius. Nmecha na esi esi na-eme na-enweghị decomposition. Maka ojiji na ugbo, potassium chloride granulated, nke na-edozi ma na-edozi mma. Granulated bụ ntụpọ na-acha ọcha nke nwere agba ntụ ma ọ bụ acha ọbara ọbara na agba aja aja. Nkịtị-crystalline - akwa kristal nke acha ọcha-agba ntụ agba, obere - obere kristal ma ọ bụ ọka.
Na teknụzụ ugbo, ọ ka mma iji potassium chloride na granulu na nnukwu kristal, ebe ọ bụ n'ụdị a na ha nwere ogologo oge, gbasaa nwayọọ nwayọọ ma na-asacha site na sediments.
Dabere na usoro eji eme fatịlaịza, ọ nwere ike ịgụ site na 52 ruo 99% nke potassium.
Ị ma? Na mgbakwunye na ọrụ ugbo, a na-eji KCl mee ihe na ụlọ ọrụ nri. N'ebe ahụ, a maara ya dị ka mgbakwunye ihe oriri E508. Njikwa chloride potassium na-adabara na ọrụ dịgasị iche iche nakwa na nkà mmụta ọgwụ, nke a na-emepụta ya na ntụ ntụ. N'ọtụtụ mba United States, ndị mkpọrọ na-adanye ya n'ime mmebi ọnwụ.
Anyị na-enye anyị ịghọta ihe mere anyị ji achọ potassium chloride. Ọ nwere mmetụta dị mma ndị a:
ịba ụba ọgụ na mgbochi nke osisi ka oké ọkọchị, ọnọdụ okpomọkụ, okpomọkụ dị ala;
enwekwu nsogbu na ọrịa dị iche iche: powdery mildew, rot, ajari;
ike na hardening nke ị ga, guzobe ha eguzogide na-ehi ụra;
fruiting mma mma mkpụrụ - na size, uto na agba;
mkpali nke mkpụrụ germination;
mee ka ndụ nke akwụkwọ nri, tomato, mkpụrụ osisi, ọka.
Fertilizing na potassium chloride na-arụ ọrụ dị mkpa n'ehihie nke oyi.
Ná nkezi, osisi ugbo na-eri nri potassium n'ụdị dị otú ahụ:
ọka - 60-80 n'arọ kwa 1 ha;
Akwụkwọ nri - 180-400 kg kwa 1 ha.
Na ọdịdị, a na-ahụ potassium nanị na ogige ndị ọzọ. Na ala dị iche iche, ọdịnaya ya dịgasị iche site na 0,5 ruo 3%, na-adabere na ngwugwu ya. Ọtụtụ n'ime ya bụ n'ala ụrọ, ala ndị kasị daa ogbenye bụ ndị kasị daa ogbenye.
Ị ma? Potassium kachasị mma nke acid 5.5.-7 pH.
Eziokwu ahụ bụ na osisi ahụ enweghị mmemme a ga-egosi site na mgbaàmà ndị a:
epupụta na-acha ọcha, na-acha anụnụ anụnụ, na-acha anụnụ anụnụ, mgbe ọ na-ejikwa ọla kọpa;
ọkụ na-egbuke egbuke gburugburu akwukwo akwukwo, nke mechara gbaa aja aja ma kpochapu (mpaghara oku);
ntụ ntụ na epupụta;
na-agagharị n'ọnụ ọnụ ákwà;
obere azuokokoosisi na Ome;
nkwụsị azụ nke osisi ahụ dum;
enweghị okooko ma ọ bụ ejection nke obere buds;
na-arụsi ọrụ ike nke stepsons;
ọdịdị nke ọkpụkpụ chlorotic na ala epupụta interstitial chlorosis;
mmepe nke ọrịa ọrịa.
Ihe ngosi nke potassium na-emekarị n'etiti etiti oge na-eto eto nakwa n'oge uto nke osisi. Enweghị potassium ka ụkọ nitrogen na-esonyere mgbe niile.
Nitrogen - isi ihe nke osisi, ọ na-emetụta uto na metabolism nke kụrụ. Iji meziwanye mkpụrụ osisi na-eji nitrogen nri: urea, ammonium nitrate, potassium nitrate.
Osisi ahụ ga - egosi ihe gafere nke potash nri na mgbanwe ndị a:
uto na mmepe;
ịhapụ obere obere akwụkwọ;
darkening nke ochie epupụta;
ọdịdị nke tụrụ aja aja n'elu ala;
ọnwụ nke nsọtụ mgbọrọgwụ.
Ngwurugwu potassium na-eduga na eziokwu ahụ bụ na osisi anaghị enwe ike ịmịnye ihe ndị ọzọ ịnweta, karịsịa calcium, boron, magnesium, wdg. Ọzọkwa, enwere oge iji nweta nitrogen. Potassium glut nwere ike ịkpalite osisi ọnwụ.
Potassium chloride achọtawo ngwa oru ugbo n'uwa dum. A na-eji ya dị ka fatịlaịza bụ isi, ẹbatara n'ime ala maka ịkọ ihe na ịkọ ihe (n'ala ala). Ọ bụkwa akụkụ nke nri fatịlaịza.
Kalin chloridum kwadoro ka o jiri ya mee ihe na ụdị ala ọ bụla. Ọ na-agbaze nke ọma na ngwọta ala.
Isi okwu mmeghe ga-ada n'oge mgbụsị akwụkwọ. Na May, a na-ebute ịgha mkpụrụ, n'oge oge na-eto eto, site na June ruo August, dịka mgbakwasa n'elu. A ghaghị ime ngwa ahụ mgbe oke mmiri ma ọ bụ mmiri ozuzo. Ọtụtụ osisi nwere ike ịzaghachi na mgbakwunye nke potassium chloride, ebe ọ bụ na chlorine gụnyere na fatịlaịza. Usoro omenala Chlorophobic gụnyere:
Ha na-eme ihe na-adịghị mma ka ha jiri ihe fatịlaịza a na-eme ihe, na-ebelata mkpụrụ. Ma n'otu oge ahụ, ha enweghị ike ịzụlite na-ejikarịghị potassium. Iji belata mmetụta ọjọọ nke KCl na omenala ndị a ga-enyere aka, usoro na usoro nke ngwa.
Oge oké mmiri ozuzo, nke ga-asa chlorine site na n'elu ala ala, ebe potassium na-anọgide na ya, nwere ike ịkwụsị nsogbu chlorine.
Ọ dị mkpa! Ọ kacha mma itinye fatịlaịza maka omenala chlorophobic na mgbụsị akwụkwọ. Tupu oge akuku ahụ, a ga-asacha chlorine na ala. Ma ọ bụghị ya, a ghaghị iji fatịlaịza na-enweghị chlorine, dịka ọmụmaatụ, potassium sulfate ma ọ bụ potassium magnesia.
Osisi ndị na-adịchaghị mfe chlorine gụnyere beets (ma shuga na nri nri), sunflower, ọka na ọtụtụ akwụkwọ nri.
Ihe kachasị mma n'enye nri nri bụ ọka, ụrọ, ọka.
Dịka anyị kwurula, a na-eme ngwa ngwa nke fatịlaịza n'okpuru nwu ala. Ụkpụrụ ndị a tụrụ aro - 100-200 g kwa 10 square mita. m. Mgbe ị na-eme ka ọnụego mmiri ga-ebelata 25-20 g kwa mita mita 10. m
A na-eji akwa ngwongwo elu n'oge oge na-eto eto na-eji ihe ngwọta mmiri. Fatịlaịza dị mfe ịkwadebe, dịka ọ na-agbakarị ngwa ngwa na mmiri. Na 10 l nke mmiri na-atụgharị na 30 mg Kalii chloridum. Ndị na-elekọta ubi na ndị na-akọ ubi na-ahọrọ ka ha na-eri obere oge ọtụtụ ugboro kwa oge karịa otu ugboro, ma n'ọtụtụ buru ibu. Ọzọ, anyị na-enye oge ndị a tụrụ aro na ọnụego ngwa ngwa maka ihe mgbakwunye maka ọdịbendị dị iche iche:
poteto - otu oge na mgbụsị akwụkwọ oge, 100 g / 10 sq. m;
tomato - otu oge n'oge mgbụsị akwụkwọ, 100 g / 10 sq. m (mmiri nri na potassium sulfate);
cucumbers - okpukpu abụọ n'oge oge na-eto eto na griin haus, okpukpu atọ na ise na-emeghe ala, 0,5 l nke osisi;
Ọ dị mkpa! Ka ị ghara imerụ cucumbers, ị kwesịrị ị na-ebu ụzọ na-eri nri ọtụtụ bushes. Ọ bụrụ na ụbọchị ole na ole enweghị mgbanwe na-adịghị mma, ọnọdụ nke osisi ahụ adịkwuola mma, enwere ike ịmekwu nri maka cucumbers fọdụrụ..
A naghị amịpụta potassium potassium na potassium, ebe ọ bụ na otu n'ime ihe ndị na-eme ihe - chlorine - nwere ike ime ka osisi ahụ dị njọ; potassium sulphate eji maka omenala a;
osisi na - amị mkpụrụ - n'oge mkpụrụ osisi na - amị mkpụrụ, 150 g kwa osisi.
Kalii chloridum dịkwa mma maka ịkọ fatịlaịza. Okwu ndị a tụrụ aro na ụkpụrụ dịka ndị a:
bulbous - na okooko osisi, 20 g / 10 l;
obere-eyịm - na okooko osisi, 10 g / 10 l;
afọ abụọ na otu afọ - ugboro atọ: na oge nke uto (10 g / 10 l), na oge ọkpụkpụ (15 g / 10 l), n'oge okooko (15 g / 10 l);
ihe nkedo - oge uto, budding, okooko, 20 g / 10 l;
Roses - ugboro abụọ n'oge uto, 20 g / 10 l;
peonies - n'oge okooko, 10 g / 10 l;
gladioli - na oge nke ọdịdị nke atọ na nke ise nke 15 g / 10 l; na oge nke e guzobere peduncle - 20 g / 10 l.
Dịka e kwuru banyere nkwakọ ngwaahịa nke potassium chloride ntụziaka, fatịlaịza na-ezo aka n'ụdị dị ize ndụ (nke 3). Ọ gaghị enwe ike ibibi akpụkpọ ahụ mgbe a gbara ya ọgwụ, ma ọ na-ewute ọnyá ndị dị ugbu a na mkpasu iwe. Ya mere, a na-atụ aro ya, ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla dị na ahụ, na-eyi akwa mkpuchi tupu ịmalite ọrụ na nri.
Akụrụngwa ahụ adịghị njọ ma ọ bụrụ na a tọhapụrụ ya na ikuku na ọdụ dị mma. Otú ọ dị, a ghaghị ichebe traktị respiratory site na nkpuchi iku ume, na anya - nke a na-ekpuchi anya. A machibidoro iji lime, nzu ma ọ bụ dolomite ntụ ọka n'otu oge na potassium chloride. Fatịlaịza adịghị emetụta combustible na mgbawa, yana inye aka na-emebi ihe.
Dị ka ntụziaka nke ndị na-emepụta si kwuo, a ghaghị ịchekwa fatịlaịza n'ime ụlọ na mmiri dị ala, ebe mmiri ozuzo ma ọ bụ mmiri mmiri ekwesịghị ịda.
O kwere omume ịchekwa na oghere, ma ọ bụ naanị n'okpuru ihe mkpuchi, n'ime ihe ndị mechiri emechi ma ọ bụ na akpa nke polyethylene.
Ndụ ndụ a na-atụ aro bụ ọnwa isii. Mgbe njedebe nke oge a, ihe ahụ anaghị efu ya. Mgbanwe nwere ike imetụta nanị ọdịdị na ogo nke friability.
N'ikpeazụ, anyị na-achọpụta na potassium chloride bụ otu n'ime nri ndị kachasị na-arụ ọrụ n'ugbo. Ya uru kwesịrị ịgụnye ihe kachasị edozi nke edozi ahụ, ịdị mfe nke iji ya na osisi ahụ.
Iji adịghị ike - fatịlaịza anaghị adabara ụdị ihe ọkụkụ niile, ebe ọ bụ na chlorine ọdịnaya adversely emetụta ha mmepe. Kalii chloridum nwere ike iji dị ka nri onwe ya, na na mixtures na nitrogen, phosphorus na ndị ọzọ nri. Mgbe ị na-eme ihe kacha mma ọ ga-arụ ma ọ bụrụ na ị na-eri nri obere obere karịa ugboro abụọ ma ọ bụ okpukpu abụọ dị ka nnukwu doses.
Eucalyptus: nkọwa, foto, ùgwù nke osisi ahụ
Kedu ka nkịta na oke bekee ga-esi soro n'otu ụlọ ahụ
Emerald mma gị windowsill: ihe niile gbasara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ orchid
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ N'iji potassium chloride fatịlaịza n'ogige